Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.4.2 PhotoCity
Ebe nrụọrụ weebụ dịka Flickr na Facebook na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịkọwa foto na ndị enyi na ndị ezinụlọ ha, ha na-emekwapụta nnukwu ụlọ nchekwa nke foto nwere ike iji maka nzube ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, Sameer Agarwal na ndị ọrụ ibe ya (2011) gbalịrị iji foto ndị a "Wụlite Rom na Day" site naghachighachi foto 150,000 nke Rome iji wughachi ntinye nke obodo ahụ. Maka nnukwu ụlọ ndị a na-ese foto-dị ka Coliseum (nọmba 5.10) - ndị nchọpụta ahụ nwere ihe ịga nke ọma, ma mmezi ahụ tara ahụhụ n'ihi na e wepụtara foto dị iche iche site na otu ngosi ngosi ahụ, na-ahapụ akụkụ ụfọdụ nke ụlọ ndị ahụ na-adịghị akọwapụta. N'ihi ya, ihe oyiyi ndị na-edebe ihe osise foto ezughị. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ afọ ofufo nwere ike ịchọta iji chịkọta foto ndị dị mkpa iji meziwanye ndị ahụ dị ugbu a? Icheta ihe omuma ihe eji eme ihe n'isiakwụkwọ nke 1, g in i ma ob ur u na ihe ndep uta nd i nwere ike ime ka nd i mmad u nwee ihe oyiyi?
Onu ogugu 5.10: Nyochaghari nke 3D nke Coliseum site na nnukwu ihe odide nke 2D site na oru ngo "Iwuli Rom na Day." Ihe triangles na-anọchi anya ebe ndi ewere foto. Edeghachiri site na ikikere nke html nke Agarwal et al. (2011) .
Iji mee ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mkpokọta foto, Kathleen Tuite na ndị ọrụ ha mepụtara PhotoCity, egwuregwu na-ebugharị foto. PhotoCity gbanwere ọrụ siri ike nke nchịkọta data - na-ebuga foto-n'ime ọrụ egwuregwu dịka otu, ụlọ, na ọkọlọtọ (nọmba 5.11), e bu ụzọ tinye ya iji mepụtaghachi nchịkọta 3D nke mahadum abụọ: University Cornell na Mahadum Washington. Ndị nchọpụta malitere usoro ahụ site n'ịkwalite foto mkpụrụ osisi site na ụfọdụ ụlọ. Mgbe ahụ, ndị na-egwu na kọleji ọ bụla nyochara usoro nwughari nke ugbu a ma nweta ihe site na ibudata ihe oyiyi nke megharịrị nwughari. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nwughari ugbu a nke Uris Library (na Cornell) dị nnọọ egwu, onye ọkpụkpọ nwere ike ịnweta ihe site na ibudata foto ọhụrụ ya. Akụkụ abụọ nke usoro ntinye a dị ezigbo mkpa. Nke mbụ, ọnụ ọgụgụ nke isi ihe ọkpụkpọ natara nwetara dabeere na ọnụahịa nke foto ha gbakwunyere n'iwugharị. Nke abụọ, foto ndị a na-ebugo ga-ejikọta ya na nwughari dị ugbu a ka e wee nwee ike idozi ha. Na njedebe, ndị na-eme nchọpụta ahụ nwere ike ịmepụta ụdị ụlọ ngosi 3D dị elu na ụlọ abụọ dị na abụọ (nọmba 5.12).
Onyonyo 5.11: PhotoCity gbanwere ọrụ siri ike nke nchịkọta data (ya bụ, na-ebugote foto) wee gbanwee ya na egwuregwu. Edeghachiri site na ikikere site n'aka Tuite et al. (2011) , nọmba nke 2.
Onu ogugu 5,12: Ihe ndi ozo nke PhotoCity nyere ndi nyocha na ndi ozo aka imeputa ihe ngosi 3D nke ulo site na iji foto ndi ndi otu. Edeghachiri site na ikikere site n'aka Tuite et al. (2011) , ọgụgụ nke 8.
Nhazi nke PhotoCity edoziri nsogbu abụọ na-ebili mgbe niile na nchịkọta data: data validation and sampling. Nke mbụ, e mepụtara foto site na iji ha tụnyere foto ndị gara aga, bụ nke e jiri ya tụnyere foto ndị gara aga n'ụzọ niile laghachiri foto mkpụrụ osisi ndị ndị nchọpụta na-ebugo. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, n'ihi ụlọ ọrụ a, ọ na-esiri onye ọ bụla ike iwepụta foto nke ụlọ na-ezighi ezi, ma ọ bụ na mberede. Ihe ngosi a pụtara na usoro ahụ chebe onwe ya megide data ọjọọ. Nke abụọ, usoro a na-ahụ maka usoro a na-azụkarị ndị mmadụ iji nweta ihe ndị kasị baa uru-ọ bụghị ihe kachasị mma. N'ezie, a bụ ụfọdụ n'ime usoro ndị egwuregwu a kọwara iji iji nweta ihe ndị ọzọ, nke yiri nchịkọta data bara uru (Tuite et al. 2011) :
Okwu ndị a na-egosi na ọ bụrụ na ndị na-ege òkè na-enye ha nzaghachi kwesịrị ekwesị, ha nwere ike ịghọ ezigbo ọkachamara n'ịchịkọta data mmasị na ndị nchọpụta.
N'ozuzu ya, ihe ngosi PhotoCity na egosi na nlele na njirimara data abụghị nsogbu a na-apụghị imeri emeri na nchịkọta data nchịkọta. Ọzọkwa, ọ na-egosi na ọrụ nchịkọta data na-ekpuchighị ọrụ ndị mmadụ na-emebu, dịka ikiri nnụnụ. Site na ezi atụmatụ, a pụrụ ịgba ndị ọrụ afọ ofufo ume ime ihe ndị ọzọ.